Qarax dad ku dhintay kuwana ku dhaawacmeen oo caawa ka dhacay Galkacyo. – Radio Daljir
Qarax dad ku dhintay kuwana ku dhaawacmeen oo caawa ka dhacay Galkacyo.
Galkacyo, Oct 22- Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay 4 kalana waa ay ku dhaawacmeen Qarax Bumbo gacameed ah caawa ka dhacay gudaha magaalada Galkacyo gaar ahaan xaafadda Garsoor.
Qaraxaan oo sida la xaqiijiyey ahaa Bumbo gacanta laga tuuray, ayaa lagu bar tilamaameedsanayey gaari ay saarnaayeen ciidan bileyska ee magaalada Galkacyo, oo xilligaasi ku howllanaa roondayn xagga ammaanka ah hase yeeshee ma jiraan wax khasaare ah oo ciidanka soo gaaray.
Bumbada oo ku dhacay meel laamiga qarkiisa ah, ayaa firir xooggan ku saamaysay dadkii shacabka ahaa ee marayey aga-gaarka waddada laamiga ah, waxaana dhaawacyo aad u halis ahi soo gaareen illaa saddex qof oo mid ka mid ahi uu isbitaalka ku geeriyooday, kaasi oo la sheegay in uu ahaa wiil 12 jir ah.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa dhammaantood la dhigay isbitaalka GMC magaalada Galkacyo halkaasi oo xilligaan lagula tacaalayo, waxaana dadka dhaawaca ahi ay iskugu jiraan rag iyo dumar ku dhawaa goobta qaraxaasi ka dhacay.
Lama oga cidda ka danbaysay falkaasi weerar, hase ahaatee saraakiisha ammaan ee magaalada Galkacyo ayaa sheegay in ay wadaan baariraanno ku aaddan ciddii falkaasi ka danbaysay.
Dhinaca kala isla caawa bartamaha magaalada Galkacyo waxaa lagu dilay nin caan ah oo lagu magacaabi jiray Baabul-kabiir, kaasi oo ahaa ninkii mayri-jiray dadka meyka ah waxaana uu dhinaca kale ahaa horjooge mid ka mid ah beelaha ku soo barakacay Puntland.
Falalkaan dilka iyo qaraxa iskugu jira ayaa ku soo beegmaya xilli todobaadadii ugu danbeeyey gudaha magaalada Galkacyo aysan ka dhicin wax fal danbiyeed ah oo ku saabsan dilalka macno darrada ah.